Methenolone Acetate (Primobolan) ntụ ntụ (434-05-9) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Methenolone ntụ ntụ / Methenolone Acetate (Primobolan) ntụ ntụ
SKU: 434-05-9. Categories: Methenolone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Methenolone Acetat (Primobolan) ntụ (434-05-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Raw Methenolone Acetate (Primobolan) ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Methenolone Acetate (Primobolan) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C22H32O3
Ọbara arọ: 344.48800
Raw Methenolone Acetate (Primobolan) uzuzu eji eme ihe na steroid
Methenolone Acetate ntụ ntụ makwaara dị ka Primobolan ntụ (CAS 434-05-9), Primo A, Primo Ace.
Raw Primobolan ntụ ntụ Usage
Methenolone Acetate ntụ ntụ kwesịrị imerụ. Maka nwoke, onye mbido na-ewere 50-100mg kwa ụbọchị, onye ọrụ na-emekarị na-ejikarị 100-150mg kwa ụbọchị, onye na-emekarị ihe na-ewere 150-200mg kwa ụbọchị, ọ bụghị karịa 6-8 izu, maka nwanyi, na-emekarị 25-50mg ma ọ bụ 50 -75mg n'ụbọchị.Ọ dịghịkwa karịa izu 4-6,
Ịdọ aka ná ntị na Nkọ Primobolan ntụ ntụ
Ọ bụ ezie na steroid dị nwayọọ, mmetụta dị n'akụkụ nke Methenolone Acetate ntụ nwere ike ịgụnye mmeghachi omume androgenic siri ike, mmejọ. Njirimara nke orrogenic gụnyere acne, na-eme ka ntutu isi na-eme ka ndị ikom buru ibu na ntutu isi.
Na-agụnye nsogbu cholesterol, dị ka mmụba na LDL cholesterol, karịsịa HDL cholesterol suppression or reduction.
Ihe ọzọ bụ na ndị na-arịa ọrịa na-agwọ ọrịa na-egbochi mmepụta nke testosterone dị ka ọ bụ ezie na ọ na-egbochi mmepụta nke testosterone, bụ Methenolone Acetate powder (CAS 434-05-9) ọnụ ọgụgụ nke mmechi adịghị ike karịa ọtụtụ steroid.
N'ime ụlọ ọgwụ ahụ, a na-eji Methenolone Acetate ntụ ntụ mee ihe iji na-emeso ndị mmadụ na-ata ahụhụ site na ọnọdụ nke mgbu ahụ na ụfụ buru ibu bụ ihe mgbaàmà. Ndị ọzọ na-agụnye: ọnweghị ike maka ndị mmadụ n'otu n'otu na-alụso ọrịa ọgụ, na-emebi ọnọdụ, ihe ọhụụ iji gbochie mmetụta nke ọgwụgwọ corticosteroid dị ogologo, na ọgwụgwọ nke osteoporosis na sarcopenia (uru nke uru dị ka agbatị na nká). Methenolone Acetate powder, dị ka Anavar, dị ka a gosipụtara na ọ dị nro na mmetụta ọjọọ ya na e tinyewokwa ya na ụmụaka na ụmụ ọhụrụ iji kwalite uru bara uru n'ime ụmụ ọhụrụ na-amụghị aka na-enweghị ihe ọ bụla na-egosi ọrịa ma ọ bụ nsí  . Onye nwere ike ịhụ ebe ọhụụ nke steroid ahụ anabolic na-abịa site na obodo egwuregwu na ndị na-arụ ọrụ, dịka ọ bụ onyinye nke na-egosipụta mmetụta na-adịghị ike androgenic nke na-enweghị obere mmetụta ọ bụla.
Esi zụta Methenolone Acetate powder (CAS 434-05-9), zụta Primobolan ntụ ntụ si AASraw
AASraw na-enye 98% Methenolone Acetate raw ntụ ntụ na bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ojiji ojiji.
Methenolone Acetate ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
Primobolan ntụ ntụ - kacha mma ịcha steroid
Nandrolone Undecanoate ntụ ntụ
Trenbolone Enanthate ntụ ntụ
Nandrolone cypionate ntụ ntụ
Ihe nkuzi (9)
Ọla abụba (13)